Home/Career Tips/7 Hab Oo Aad Ku Horumarin Karto Shaqadaada
Abuuritaanka himilooyin horumarineed oo shaqo ayaa kaa caawin kara inaad waxbadan gaarto/gaadho, aadna u ballaadhiso xirfaddaada isla markaana aad u kordhiso qanacsanaanta shaqada. Qodobkan waxaynu kaga wada hadli doonnaa siyaabaha aad u abuuri karto yoolalka horumarka shaqada.
Sida loo abuuro himilooyin horumarineed
Hadafyada horumarineed ee shaqadu waxay kaa caawinayaan inaad horumariso xirfadaha muhiimka ah, sida inaad noqoto hoggaamiye xeelad badan ama aad si hufan u maamusho waqtigaaga. Waxaa jira xeelado fara badan oo lagu wajahayo yoolalkaaga horumarinta xirfadeed, iyadoo kuxiran ujeedadaada. Waa kuwan tusaalooyin dhowr ah oo ku saabsan sida loo abuuro yoolal horumarineed oo wanaagsan:
Raadso aqoonkaabid tababar hogaamineed.
Hel qof lataliye ama hage kuu noqda
Wax badan ka baro shirkadda ama hay’adda
Horumari xirfadda maareynta wakhtiga
Hagaajinta Cilaaqaadka shaqada
Horumari xirfadahaaga dhageysiga.
Raadso aqoonkaabid tababar hogaamineed
Koorsada tababarka hoggaamintu waxay kaa caawin kartaa inaad barato dhaqamo iyo xirfado cusub marxalad kasta oo aad ku jirto xirfaddaada. Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad ogaato siyaabo aad ku wanaajin karto jagadaada shaqo ee hadda iyo xirfadaha kaa caawin kara inaad horumar ku gaarto shaqadaada.
Haddii aad xiiseyneyso inaad qaadato koorsada tababarka hoggaaminta, fiiri haddii kulliyadda bulshada ee kuugu dhow ay bixiso fasalkan. Badanaa waad kaqeyb geli kartaa fasalka habeenkii ama fasalka fogaan barasho ah (Online) si aad ugala shaqeyso jadwalkaaga hadda.
Qof kaa aqoon, khibrad iyo waayo-aragnimo badan in aad ka dhigato hage waa muhiim wakhtigan aynu joogno. Qof daacad ah oo aad wax ka weydiiso horumarinta naftaada iyo yoolashaada nolosha ama shaqadaba. Hage ama lataliye aad ka heli karto talooyin ku kaaba oo kaa duwa guuldarooyinka isla markaana noqda muraayad aad isku daawato oo qiimeyn kara waxqabadkaaga nololeed iyo mid shaqoba.
Ogow yoolaha, hiigsiga iyo qorshayaasha u yaala goobtaada shaqo. Waa habka ugu muhiimsan ee aad ku ogaan karto waxyaalaha aad ku wanaagsantahay ee aad ku kordhin karto goobtaada shaqo.
Waa muhiim in aad fahamto shaqooyinka ka dhex socda shirkadda ama hay’adda aad ka shaqeyso. Fur furnow, isbarta dadka ka shaqeeya waaxa kala duwan, wakhti aan badnayn la qaado si aad wax uga ogaato shaqooyinka ay hayaan iyo kaalinta ay kaga jiraan goobtaasi shaqo. Habkani wuxuu ku tusayaa waaxaha ay u baahan yihiin inay si habsami leh ula shaqeeyaan adiga, iyo sida aad ugu fiicnaan karto sida ugu wanaagsan ee aad ku hagaajin karto borotokoolka.
Mid ka mid ah fikradaha horumarinta himilada shaqo ugu fiican ayaa ah barashada sida loo maareeyo waqtigaaga. Markaad yeelato xirfaddaha maaraynta waqtiga waxaad ku guuleysan doontaa kamidho dhalinta yoolashaada. Waxaad noqon kartaa qof waxqabad badan, wax soo saar leh oo ku qanacsan shaqada uu qabanayo ama ay qabanayso .
Habka ugu habboon ee aad ku maamuli karto waqtigaaga si wax ku ool ah ayaa ah inaad la socoto sidaad u isticmaasho. Adeegso barnaamijka maaraynta waqtiga oo kuu sheegaya inta maalmood ee aad ku bixisay hawl kasta. Hubso inaad waqti ku bixinaysid hawshaas gaarka ah oo kale si aanad uga mashquulin kuwa kale. Haddii aad isku aragto inaad mashquulsan tahay badanaa, tixgeli inaad dejiso xilliyada nasashada ka dib dhererka waqtiga shaqada ee loogu talagalay.
Inbadan waxa aynu u halgannaa buuxinta caloosheena iyo huga aynu xidhnayno. Waa muhiim in aad hoos u eegtid maalgelinta maskaxdaada si aad u kasbato aqoon kaa fikirsiisa. Alberto Einstein ayaa laga hayaa, ‘’ Waxbarashada macneheedu ma aha in aad barato xaqiiqooyin balse waa in ay maankaaga ku tababari kartaa in aad fikiri karto.’’ Ilaha ugu waaweyn ee aad aqoon ka heli kartaa waa in aad abuurataa caado wax akhris. Imaamu shaafici ayaa sidoo kale laga hayey,’’ Maalin alaaliyo maalinta aan wax akhriyo waxa aan ogaadaa jaahilnimadaydii.’’
Maalgelinta garaadkaagu waxa ay kusiinaya nolol hore usocod leh iyo shaqo hufnaan ku dhaxalsiin karta in aad dalacsiiso isla markaana dadka kula shaqeeyan waxbadan tarta. Garaad fikiraya oo xalin kara mushkiladaha ka horyimaada, qorshayn kara nolol derejo sare leh adduun iyo aakhiroba…..
Wanaajinta xidhiidhka aad la leedahay dadka kula shaqeeyan waxa ay kordhisaa waxqabadka waaxda aad ka tirsantahay. Waa tiir kamida tiirarka dhiirigeliya wada shaqeyn midho dhal leh. Xidhiidhadaasi si ay u wanaagsanaadaan, Ula dhaqan dadka kale sida ugu macquulsan ama aad jeceshahay in laguula dhaqmo.
Waa mid keeni karta gaadhista hiigsiga maalinta, todobaadka ama bisha ee shaqada la idiin dejiyo waaxdiina. Waa u adeegista macaamiisha, wada shaqeeyayaasha iyo loo shaqeeyayaashaba qaabka ugu meeqaamka sareeya taas oo kalsooni badan siinaysa dhammaantood. Isla markaana keensanayna ku faraxsanaanta lasii shaqeynta shirkadda ama hay’adda….
Horumari xirfadahaaga dhageysiga
Xirfadda wada xidhiidhku (Communication Skills) khubrada wax ka qoraa waxa ay ku andacoodaan in 50% xirfaddaasi tahay dhagaysiga. Si aad u xoojiso xirfaddahaaga dhageysiga ku tababar inaad si firfircoon u dhageysato qofka kula hadlaya. Diiradda saar waxa ay sheegayaan luqadda ama ereyada ma aha macnaha ayaa ka muhiimsan. Adiga oo fiiro gaar ah u yeelanaya jidh ka hadalkooda maadaama tani ay tahay hab isgaarsiineed oo xoogan. Weydii su’aalo haddii aad u baahan tahay in qodobadda qaarkood la caddeeyo oo u oggolow inay marka hore fikirkooda dhammaystiraan ka hor intaadan ka jawaabin.
Markaad waqti siiso inaad si taxaddar leh u dhageysato macaamiishaada ama dadka kula shaqeeya, waxaad maqli doontaa macluumaad muhiim ah iyo faahfaahin kaa caawin doonta inaad si wanaagsan ugu adeegto macaamiishaada oo aad u qabato shaqadaada si hufan.
U dejinta himilooyinka horumarka shaqada waa hab fiican oo kor loogu qaado wax soo saarka isla markaana looga dhigo waayo-aragnimadaada shaqo mid aad u xiiso badan. Ka shaqeynta yoolalka waxay ku tusin doontaa kormeerayaashaada inaad dhab ka tahay hagaajinta shaqadaada, taasoo ka dhigeysa inay u badan tahay inay kugu tixgeliyaan dalacsiin ama kor u qaadis.
Xuquuqda Qoraalka: Somalijobs INC